Forum serasera malagasy tanjaka amerikana - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : tanjaka amerikana
leebily - 04/11/2016 16:31
bnjr daouly.iz ry reto n mety h lany any etazonia?le vevav s le lelah?
rhaj0 - 07/11/2016 02:04
Izay prezida amerikana ao moa dia manana influence betsaka @ fiainan'ny firenena sy olona rehetra eto an-tany eto. Ka dia ... raha hisy fiantraikany @ tena ihany izy ity, dia mba zaraina ny eritreritra ny @ izany eeee...
Izaho dia maka an'i Hilary. Satria :
1- mba vehivavy no tompon'ny fahefana (politika) ambony indrindra (ao Zamerika ao); mba hotarafin'ny anabavy sy zanaka vavy rehetra fa afaky ny ho toa izany koa izy. Niara-nahita teo izao fa i Obama prezida mainty, dia inspiration ho an'ny mainty, ary raha ny fahitako azy, toa an'i Kofi Annan tao @ UN ihany, dia mba miova (ho tsara) ny fijerin'ny hafa ny mainty.
2- i Hilary dia mihilana ankavia na Liberaly @ resaka politika, izany hoe
- TSY mijabaka @ fiainan'olona (individuel) ny Fanjakana. Midika hoe pro-avortement, na hoe ny viavy no tompon'ny teny farany @ tenany, na koa pro-LGBT, na ny vivre et laisser vivre-n'ny Liberaly.
- Mila mijabaka @ fiainana ekonomika ny Fanjakana raha azo atao. Midika hoe, hampihatra impots (ho an'ny mpanankarena) ohatra, ary izany dia ho ampiasaina hanaovana lahasa (investisma...) ho an'ny besinimaro. Na koa hanampy/hanamafy ny didy aman-dalana raha ny momba ny tontolo iainana...
Fa ny zava-dehibe iray koa, dia mba ho Juges mihilana ankavia koa no ho fidian'i Hilary ho ao @ Cour Supreme amerikana ao.
3- raha ny traikefany, dia ho misimisy ny fiarovana na fampandrosoana ny zon'ny viavy sy izay politika Liberaly. i Obama koa izay mainty, ary activiste mainty fony fahatanorany, dia nampandroso ny cause mainty araka izay azony natao. Fa ny system politika amerikana moa compliqué (check and balance, federalism, lobbyism, ...), ka dia tsy tena hoe hanao fahagagana akoriny i Hilary @ io, fa mba hisy firosoany ny @ ireo.
Ny fanakianana reko @ Hilary, dia hoe
1- izy efa ela no nihosina tao Washington.. NEfa moa, raha TSY nihosina toa izany i Donald, dia mbola mila ireo olona "nihosina tao Washington" ihany koa izy.
2- izy dia hoe "mandainga" na tia kinafinafina. NY hitako dia hoe, "manafina/mandainga" toa antsika rehetra ihany i Hilary, "white lies", izay matetika hiarovana tena na olona hafa na ilay system (a harmless or trivial lie, especially one told to avoid hurting someone's feelings). Ny an'i Donald indray anefa rehefa "mandainga", dia ilay mi-"bullshit", izany hoe, tena lainga/fitaka BE ahafahany mahazo zavatra (tsy @ ara-dalàna).
Na dia nandaginina azany ny nanaraka ny fampielezan-kevitra amerikana teo iny, dia raisiko ho "fianarana"
1- Nihahaka teo ny toetra ratsin'ny sasany (manana vola/fahefana). Ny fijery (sy fanaovana z'inona na fanalikana akoriny aza), ny fijerin'i Donald ny vehivavy, ny kilemaina, ny Arabo/Silamo, ny Meksikana sns... dia niarahana nahita fa dia mbola misy, ary misy koa ny manohana, ny fisainana toa izany. Ka dia mbola mila miady @ io habadoana BE io foana ihany izany isika rehetra, fa mbola tsy vita io na dia ao Zamerika ao azany.
2- Nihahaka koa ny paika ratsin'ny sasany (manana vola/fahefana). Ny fanodinana ny business tsy handoa hetra, ny fanodinana fondation mody hoe manao asa soa. Nihahaka ny herin'ny vola eo @ politika.
3- NIhahaka koa ny "white lies" an'i Hilary sy ny email-ny. Anatra ho antsika rehetra izany, indrindra ireo politisiana, fa efa andron'ny mangarahara izao, indrindra ny eraky ny interinety
rhaj0 - 07/11/2016 13:37
Inona no ifandraisan'ny politika amerikana @ fiainana na fiainam-pirenena malagasy?
Ny politikan'ny Republican/Democrat dia voavelabelatra eto ohatra, https://www.devex.com
@ ankapobeny, raha ny fahazoako azy, dia misokatra koakoa ny hanampy ny Tany mahantra ny Dems. Ny Reps kosa dia TSY marisika @ izany, raha tsy hoe, tena misy "interet"-ny tokoany ao. Marina fa ny Dems koa milaza ny "interet amerikana", fa raha ny fahatakarako azy, dia
- ny an'ny Dems, dia hoe, milamina ny tany, ary afaka mi-bizina (daholo) ny bizina.
- ny an'ny Reps kosa, dia ireo corporate bevolabe manohana azy, dia manantena ny iverenan'ny ekolazy naloany ho avo 10 heny ohatra.
Fa mampieritreritra tokoany fa ny Reps no teo t@ voadaka Radidy, ary Dems no teo t@ iny coup d'etat iny. Ka (tsy) nanampy ve ny Reps/Dems?
Raha ny fahazoako azy, dia hotry ny hoe latsa-pitia t@ Ra8 ny tao @ White House t@ ireny 2000s ireny. Hoe, toa ilay "American Dream", dia "you can be what you wanna be", ka mpivaro-dronono dia lasa prezida. Sady @ izay, raha an-kisarisary, dia tena revy kapitalisma be ny an-dRa8, nefa ny an-dRadidy dia revy miaramila (jadona). Dia tena nanampy tokoany moa izy, ary i Mada azany (miaraka @ Honduras) no tena mba tiany ho ohatra velona @ fahombiazan'ny politika amerikana, @ ilay Milleniium Challenge-ny. Tokony mba win-win situation iny, nefa moa dia rava sy potiky ny coup d'etat.
Ny t@ coup d'etat indray, dia ... raha mbola ny fahitako azy ihany, dia hotry ny laony ihany ny Amerikana (ilay ambassa) ny @ nataon-dRa8, izay nokianin'ny BM na FMI izy teo. Saingy tsy mailo zareo, fa ireo mpanao coup d'etat anie ka TSY @ "interet american" koa, ary pire akoriny aza. Efa lasan'ny kivindro ny hena, izay Obama vao taitra, ary namely fantsy t@ 26 Juin, ka TSY niarahaba ny mpanao coup d'etat izy, fa nilaza fa manantena ny iverenan'ny demokrasia.
Fa rahefa Hillary no ho eo (faniriana ny ahy, ary enga anie), dia mino aho fa hanampy an'i Mada foana ny Amerikana, ary @ "ara-dalana" izany, izany hoe,
- manaja lalàna ny mpitondra eo, manaja ny fahalalahana ary koa miambina ny sécurité...
- ary mahay ny mekanisma fahazoana fanampiana sy fanaovana bizina, mahay izany noho ny hafa, na mpitondra na mpanao bizina gasy.
Ka miankina amintsika ihany io izany, raha ny fahitako azy.
rhaj0 - 07/11/2016 17:31
Fanampiny kely @ "fianarana" azo
4- Io izany fa toa ny zava-drehetra, dia ny mahaliana ny olona dia ny "fialana hamohamo" fa tsy ny zavatra "sérieux".
- I Donald dia miteniteny mipoapoaka (mba tsy lazaina hoe lainga foana) ary miteniteny tsisy fotony (@ hevitra hoe tsy mitombona tsisy fahamarinany koa), nefa dia mihaino sy mankafia na manaraka foana ny olona SY mpanao gazety.
- I Hillary anefa sérieuse ary manome antsipiriany conceptuel sy teknika, nefa dia laoniny ny olona ary tsisy mihaino SY mpanao gazety. Dia voatery manao attaque koa i Hillary farany.
Ka ny hevitra dia rahefa mibahana eo @ haino aman-jery hono, na @ ratsy na @ tsara, dia lasa malaza ary misy ny lasantsy ny ifidianana na itiavan'ny olona anao (satria mba fantany ianao)
Dia hita izany fa ny mahamaika ny mpampita vaovao, dia ny azahoana mpanaraka betsaka. Ny mitatitra resaka a scandales dia averimberina, fa ny fandalinana sy fanadihadiana toa lalovana fotsiny. Ny loza dia rahefa mandainga na misy miteny ratsy, dia mipariaka eraky ny gazety, nefa avy eo, rahefa sirika, dia toa tsisy resaka. Ny dégats @ io efa vita.
5- mahavariana fa na dia hoe ao zamerika azany io, mba heverina fa mba efa mazava saina, dia mora voajonon'ny mpamitaka ihany ireto olona: rahefa averimberina ny teny iray (ohatra "law and order" na hoe "lower tax"), na koa resaka iray (hoe "olon-doza i Hillary"), dia miraikitra ao an-tsain'ny olona izany, TSISY fanadihadiana ary TSISY fandalinana akoriny izany.
Fa ny mampivanaka ahy dia hoe, ahoana azany ny mpiasa madinika mino ary miady ho @ "lower tax" ohatra.
- ny Tax-ny raha mba hihena, dia ho 500$ raha betsaka, Ny an'ny mpanana anefa mikepoka 1million tsy ferana. Dia nefa, rahefa tsisy tax ao @ kitapom-bolam-panjakana, dia tsisy vola amboarana lalana ohatra. F'angaha i Rampanana mivaky loha fa ny 4x4-ny vao mainka miasa tsara. Ny an'iilay mpiasa madinika, potika ny fiara, tsisy asa ny mpanao lalana.
- hoe ny vola-na tax tsy naloan-dRampanana dia lasa investisma ka ahatsara ny ekonomia ("trickle down"). Io aloha efa fantatra fa TSY nety t@ andron'ny Reagan, nefa dia mbola arangarangan'i Donald ihany, dia mino tokoany ny olony.
Ny Biznessman dia manana reflexe ny haka tombony foana, fa TSY hanao soa iombonana izany (altruisme). Ohatra i Donald hono manana fondation. Fa ny mividy sary hoso-doko lehibe maneho ny sariny no nataony. I Donald hono manome vola am-posiny ho an'ny propagandiny. Nefa io vola io kay naloany ho an'ny hotel-ny izay nanaovany ilay propagandy. Vao t@ roa sa telo volana koa ohatra ilay orinasa Bombardier aty dia namena volam-panjakana mba avotana hono. Niherina ny volana, fa noroahiny ny mpiasa an'arivony.
Ka dia raha ny fahitako azy, ary mampalahelo, dia ireto olona dia "mitolona ho an-dRampanana" toa an'i Donald. Ary ireto olona minomino an'izany dia hita mazava fa ireo ... "déplorables" hozy i Hillary izay, na raha tsorina, dia ireo "white trash" hozy ny tsy mpanao ilay "politically correct", tsy dia nahita fianarana ary mahantra.
rhaj0 - 07/11/2016 18:42
Ny mahantra nefa manohana an-dRAmpanana toa an'i Donald, na koa ny Reps dia eo ihany.
Fa ny vehivavy manohana an'i Donald eee... Nefa anie, ianao vehivavy manohana io @ io mety amen'i Donald ny naoty 3 sur 10 fotsiny.. Izany ve no modely tianao ho tahafin'ny Ankizy, fa tsy hoe, mba mahavaky ilay tafo-trano fitaratra (glass ceiling) ihany farany ny vehivavy
Dia ny mainty hoditra manohana an'i Donald eee... Hozy Donald izay hoe "law and order", dia rebika tokoany. Nefa inona ny "law and order"-n'i Donald fa tsy "Stop and frisk". Ny dikan'io dia, rahefa mandehandeha ny polisy, ka mahita boaikely fotsy hoditra ohatra, dia ok, normal. Fa raha vehivavy mainty hoditra, dia tena mila kaody ny polisy fa mety mitetika zavatra izy mieritreritra io, koa dia afaka ny ho savaina tsotra izao.
Dia ny Arabo, ny LGBT, ny Kilemaina hifidy an'i Donald dia aoka fotsiny...
Fa misy "fanantenana" hono, raha tarafina ny "zava-bitan'i Donald" eee... Mety inspiration kosany ny nataony: rahefa 59 taona ianao, dia tena mbola misy fanantenana hipeka sipa manjabe (grab her by the pussy, hozy Donald izay), ary mbola mety hilatsaka ho prezida koa rahefa 70 taona, aorian'izay.
mba manala azy kely aho, fa tena ory mihitsy aho ato mieritreritra, fa "misy lasantsy" ny hahalany an'iliay rangahy io...
rhaj0 - 09/11/2016 13:51
valaka tanteraka eeee... tena valaka tanteraka.
pakopako - 09/11/2016 14:47
Misaotra anao nizara ny traikefa fa mahafinaritra ilay analyzenao fa tohizo, indrisy fa lany ilay tsy noeritreretin'ny rehetra, d miandry izay avoakany isika izao.
endriny - 09/11/2016 16:00
Resaka tsy resaka ato am-piasana fa lany ingahy Trump. Tezitra be daholo ny rehetra...
Angaha tsy mampihomehy e.
Prezida an'olon ary lavitra be ary dia atao mankarary fo aty andakira aty.
Sady tsy hanampy iray kapoaka amin'ny vary arotsakay no tsy anampy fakioran'ny JIRAMA. Kanefa dia izahay no tezitra be.
rhaj0 - 09/11/2016 17:42
Dia inona tokoany moa izany ny fiantraikany "mivantana" @ Malagasy @ ity nahalany an'i Donald ho filoha amerikana izao ity.
1- ny tontolo iainana.
T@ niaraka tamin-dry Obama azany dia efa henjana be ny nahazoana ny Amerikana mba hiaraka @ firenen-drehetra hamaha ity global warming ity. Izao anefa i Donald dia efa nilaza fa hanipaka an'io, fa resakabe fotsiny, hoz'izy, izany "changement climatique" izany.
Raha tsy manohana ny ezaky ny firenena rehetra @ io ny Amerikana, dia hihahaingana ny faharavana, satria ny tany hafa koa ho tsy te-ahalala. Nefa ny Amerikana no voalohany mahatonga ny faharavana. Ary misy fiantraikany tokoany amintsika io.
5ème pays le plus vulnérable au monde au changement climatique pour les 30 prochaines années d’après le classement de l’organisation indépendante américaine Maplecroft, Madagascar voit tous ses secteurs d’activités socioéconomiques affectées par ce problème.
2- ny tribonaly internasionaly.
Tsy hiresaka izay politika raharaham-bahinin'i Donald ao aho, fa ity zavatra mahakasika antsika ihany. Na t@ Obama azany dia efa TSY mba miaraka @ ankamaroan'ny firenena rehetra ny Amerikana. i Donald dia vao mainka henjana be @ io. Ka dia izay jiolahim-boto hafa rehetra koa izany dia tsy hita ho enjehina eny @ tribonaly internasionaly intsony
3- ny fifandraisana ara-barotra.
Tsy dia nisy resaka aloha ny @ io t@ propagandy. Fa @ ankapobeny, dia "isolationiste" i Donald, izany hoe, tsy misokatra @ isokafan'ny tsena (ALENA,...). Ny AGOA moa fifanarahana h@ 2025, nefa moa, i Donald dia efa nitrifana foana fa ho korontaniny hono izay rehetra nifanarahana, raha hitany fa hoe "bad deal" ho an'ny orinasa amerikana. Ka dia efa kaodikaody daholo ny olona.
Nefa anie io no mba (n)ahafahantsika ... tsy hiankin-doha an'i Renimalalan'ny sasany lava io
4- Fa ilay fitondra-tena manokana
Ny nasehon'i Donald teo, h@ nataony efa taloha be, dia ... nahavaky fanahy izay nanaraka iny propagandy iny: Izany ve no ohatra amena ny Ankizy? misogyne, raciste, islamophobe, bully... mandainga i Donald mba ahafahany mahazo zavatra...
5- Ary ilay fitondra-tena-na politisiana
Dia mbola vaky fanahy daholo ihany izay nanaraka iny propagandy iny: Izany ve no ohatra amena ny mpanao politika any @ tany mahantra toa antsika ohatra? Ilay hoe, raha tsy mandoa impot dia satria hono "smart" izy, dia eo ihany, fa maro be ireo lainga be asosasosany ary averimberiny. Na dia efa tsipihina aminy azany fa hoe dia vavany taloha ilay izy, dia anaovany bemarenina, fa ny azy ihany no asesiny sy averimberiny.
Be dia be no mbola azo resahina, fa hotry ny negative loatra aho... asa ve hoe, mila manao ezaka mafy aho izany hitady ny positive @ ity, fa izao aloha dia ... izaho aloha zareo dia tena valaka tanteraka aaa... tena valaka tanteraka ho'a.
endriny - 09/11/2016 19:07
Fa misy Malagasy mahazo tombony amin'izany tontolo iainana izany ve? Ny mpiasan'ny tetik'asa sy ny mpikirakira ao amin'izany no mirifatra amin'ny 4x4 eraky ny kianja ka ataon'ny Solom-bavam-bahoaka faka tahaka tsara. Ny ala sy ny tanety may foana.
Fa tsy mbola nisy mihintsy firenena madinika nandresy teo amin'ny Tribonaly irasam-pirenena na iza mpitondra Amerikanina teo na iza. Ka aza mamindro lavitra ny afo e. Mety any Kanada any angaha no mahazo rirany amin'io... fa ilay izahay aty tezitra amin'ny zavatra tsy mahakasika anay..
Izaho tsy hanantena valala manidina mihintsy aloha. Sady ry zareo koa manana didy tsy azo ivalozana dia inona no andrasana eo moa.
Nefa anie io no mba (n)ahafahantsika ... tsy hiankin-doha an'i Renimalalan'ny sasany lava io.
Ka na eto an-Tanana aza matin''ny frippery sy ny sinoa ny mpanjaitra Malagasy. Ireo mba mahay mandrafitra indray matin'ireto entana tonta mahazo fihenana amin'ny tamberim-bidy avy any Eraopa ireto. Fa tsy haiku aloha izay any Kanada a
Matin'ny fanafarana entana sandoka ataon'ny Karana amin'ny bonbon sy biskoi lany andro ny mpanao bonbon gasy.
Dia I Hery Rajaonarimampianina izao efa nanambady in-telo, ihihihiih. Hollande vao lany president dia nariany ny vadiny.
Raha ny fanavakavahana indray dia aleo tsorina aloha fa eto amintsika mihintsy no misy io Islamophobie io amin'izao fotoana izao. Romotra daholo ny Kristianina fa sady manangana Maosike ny SIlamo no manangana Oniversity.
Mbola tsy hiresaka aho hoe ny ambany Tanana sy ny ngita sy ny andriana ary ny cotier sy ny Haut-plateau a.
Ka inona moa no andeha andaniako andro amin'ny zava-misy any Amerika. Raha tsy hoe mba te hanafina ny eto aminay aho angaha.
Hoy ilay olona izay: "Tsara sy milay be any an-dafy... dia hoy aho hoe: "Samy manana ny atao hoe tsara aminy". Dia tezitra indray ilay olona.
Izany hoe somary maneso ny Amerikanina kely aho amin'io valim-pifidianana io. Satria nahoana hoy isika?
Ny Amerikanina izany no milaza fa tompon'ny fandrosoana, ary ivon'ny teknaolaojia eran-tany. Sady ny olona any aminy milaza fa mpahay lalana daholo. Kanefa dia mbola fomba fifidianana tamin'ny andro tsy misy telefaonina ihany no entiny mifidy. Dia izao no vokany. Ilay olona nahazo ny isam-bato ambany indray no lany.
Ka vaky vava ihany aho hoe: "Mahay ve ny Amerikanina"?
rhaj0 - 09/11/2016 19:42
1- Ny @ tontolo iainana aloha, dia tsy azo tamoraina. Marina fa io dia anararaotan'ny ONG sy mpitondra gasy mba hihinanany koa. Fa raha TSY ezahina vahana miaraka @ firenen-drehetra io, dia "5ème pays le plus vulnérable" hono ho'a isika.
Ka ny (tokony) iadiantsika, dia mba ny hahita mpitondra sy tompon'andraikitra mba mahay (manararaotra ny mana) ary mba mitsinjo tokoany ny mpiray tanindrazana.
Nefa raha angarihan'i Donald io resaka io, dia very daholo koa isika mianakavy. Izany ve no tadiavintsika?
2- Ny @ tribonaly internasionaly dia tena mbola "work in progress". Raha ho tapaka am-bohoka toa izay izy io, dia ... veloma lava ny rariny sy hitsiny eee... Ny isan'ny nandavan'ny Amerikana an'io, raha ny fahalalako azy, dia satria nisy nahasahy nanombana hoe, ho enjehina koa ry GWB sy ry Dick Cheney mbamin-dry Rumsfeld. Izao izany mandry daholo ny salanitry ny jiolahim-boto. Izany ve no tadiavintsika?
3- Ny @ fisokafan'ny tsena @ ankapobeny k'lou dia @ OMC (org mondial commerce). Fa ilay AGOA dia miaraka manokana @ Amerikana. TEna azahoan'ny orinasa, na ny vokatra/akora malagasy, tombony (eo @ tsena amerikana) betsaka io. MIditra tsy mandoa haba ny entana Malagasy. Jereo ny salan'isa io ambany io. Ary tsy lazaina akoriny azany ny asa vokatr'i AGOA. Tsy efa hay ve fa nony tapaka ny AGOA noho ilay coup d'etat dia efa ho 400.000 asa direkta sy tsy direkta very??? Dia gaga ve ianao raha lasa mivaro-tena ny ankizy vavy malagasy izao ???
si la valeur de l’exportation des produits textiles de la Grande Île vers le pays de l’oncle Sam était de 6 millions de dollars le premier trimestre de 2015, cela a atteint 16 millions de dollars le premier trimestre de cette année. A titre de rappel, le pays a occupé la première place des pays exportatrice de l’Agoa en 2008.
En 2008, les exportations des entreprises franches au titre du textile ont rapporté 324 millions de dollars. (..)
4- ny @ fitondra-tena dia... teo azany mba nisy ohatra azo tarafina, i Obama, nefa dia mitsotsotsotso ihany ry jiolahim-boto. Izao izany i Donald sy ny toetra alikany no eo. Vao mainka tena aza misy mifampiteniteny fa samia manao ny loham-botony izany. Izany ve no tadiavintsika?
Kivy tanteraka aho rey olona aa....
endriny - 09/11/2016 20:23
Tena aza fady fa tery saina loatra aho, ka tsy mety takatro mihintsy izay ho tombontsoa amin'izay mety prezida any Amerika aloha hatreto.
Ny tontolo iainana, lazaina fa faha-5 amin'ny mety iharam-boina isika. Firy moa ny tany eto ambonin'ny tany manana ahabo iva noho ny vohontany misy eto Madagasikara? Dia maninona ireny no tsy laharam-pahamehana... sa hoe izay ahazoana saosy marina angaha ka...?
Raha izay lazaina hoe fitombon'ny hafanana eto an-tany. Vao 11.000 taona ange ny tany no nangatsiaka e, fa taloha nafana be daholo. Maro tamin'ny tany teto Madagasikara no safotry ny ranomasina tamin'izany.
Ka zovy aza no mahavita elobe andrakafofana ny tany mba tsy hafana. Ilay firenen-dehibe mpanimba ny tontolo iainana? rahoviana izy vao ampitsahatra ny sambo sy ny raoplanina sy ny sambon-danitra tsy andeha intsony. Sa dia hoe ianareo ao Madagasikara ao aza dia mandorondoro intsony fa ity misy azo ividianana paraky.
Ny AGOA, marina ny volazanao fa aman'hetsiny no very asa tamin'ireny krizy ireny. Saingy izao, asa fanandevozana vaovao ireny amiko, ary asa natao hampiankinan-doha ny olona amin'ny zavatra tsy maharitra. Jereo ny any Japana fa soloiny Raobao ny mpiasa satria fantany fa tsy izay no tena ilana ny olona.
Fa ilay AGOA moa SMOTIG mandray tambin-karama ka dia eto isika manaty tambin-karama eto ihany. Ka rehefa tsy misy mandrotsaka dia miara maty eto... ry zareo ve moa ho faty fa ny madinika ihany no ataony mitsitratsitra eny dia rehefa mijaly tsara dia tambazany kely indray..
rhaj0 - 09/11/2016 22:01
1. ny @ tontolo iainana
Misy ilay nosikely Tuvalu hono dia ho mampamangy. Dia na i New York City azany dia misimisy ihany ny ho difotra.
Ny olana dia ireo Amerikana, toa an'i Donald, na koa ireo Kristiana minobe, dia TSY mety manaiky (na hoe TSY mino) fa hisy izany, ary ny "rechauffement climatique" no mahatonga izany. Ao no milaza fa efa plan'Atra n'inon'inona eo. Dia lazainy fa vao tany L.A. ohatra izy, ary dia tena nangatsiaka hono. Ny Siantista anefa im-100 kely manome ny salan'isa maripana, fa tena miha-mafana ny Tany; ao ny maneho an-tsary ny fitsoniky ny ranomandry any @ tendrotany avaratra.
Fa ireo TSY mety manaiky ny "rechauffement climatique" dia, rahefa halalinina, dia ny vola miditra aminy (raha tompon'orinasa izy), na koa ny ASA ho azy, sy indrindra, ny confort materiel-ny sy ny consommation-ny no mahamendy azy.
RAha ohatra ka miombo-kevitra na manohana ny heviny koa ianao, dia ... mampalahelo ihany fa.. io hotry ny hoe, dia "mitolona" ho an'ny Rampanana-tia-tena koa ianao izany eee... Nefa ve ianao koa mba migalabona toa azy???
Raha ny fahazoako ny "tax carbone" izao ohatra, dia ireo fatra-mpangetotra karibona dia asaina mba mandoa tax ho an'izay mampihena ny karibona (ny ala gasy ohatra). Ka rahefa hozy i Donald hoe, TSISY an'izany, dia... TSY mahazo volan'ny tax carbone ny gasy izany eee.... Dia nefa ny carbone-ndrizalahy no manafana ny taninao ao. Izany ve no tadiavintsika ???
2- Ny @ hoe AGOA "fanandevozana" indray k'lou dia ... tsy izay indray no fahitako azy:
1- mba manana asa dia afaka mamelom-bady aman-janaka ny olona. T@ coup d'etat ireny ho'a, dia very ny asa 400.000. Raha atao hoe olona 4 ny fianakavian'ny mpiasa iray, dia efa hoe 1.6 millions olona anie izany no TSISY fidiram-bola hividianam-bary ee !!!! 1/10 sa 1/15-n'ny gasy !!!! Eo ilay mitsirara.
2- dia fianaran'asa koa io. Mandoa ekolazy ankolaka izany ianao mandray karama varimasaka. Fa avy eo, arakarakao ihany io. Rahefa hainao ny natao tao, inona no manakana anao hanita-kevitra?? Ny Viet-namiana izao nikezaka mafy, ary dia izy indray no efa mifaninana @ Sina.
rhaj0 - 10/11/2016 01:44
endriny - 10/11/2016 04:30
Mifoha maraina aloha fa maika hiala ambotala dia mahita ny valitenin'ny Namana Rhaj).
Dia variana ihany ny tena raha olona milaza fa mpandala ny atao hoe fahalalan'olombelona ara-tsiansa no milaza fa noho ny ataon'ny olom-belona no mahatonga ny tany hafana.
Ho ahy dia tsotra, mety mahatonga ny ny tany hafana ny ataon'ny olom-belona, saingy ianao milaza fa mpandala ny siansa indray no minia mikipy fa talohan'ny pleiocene ange ka nafana noho izao ny tany e.
Toa adino fa tsy ampy 1/3 ny lanjan'ny tany fotsiny ito avelany manana hafanana manodidina ny 37 seliosa ito. Ka raha, izay no izy raha mitady ny marimaritra iraisana na ny Equilibre thermic amin'ny tany izany isika dia tsy tokony ho gaga mihintsy raha miha mafana ny tany.
NY taxe de carbone ve afaka anentsenana ireo lavaka volkano mandefa entona in-100 avo heny amin'ny setroky ny fiara rehetra madeha eran'izao tontolo izao.
Sa atao ohatran'ny 1/10 any am-piangonana io ka saosy tsinona koa!? raha ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany tokoa moa ny asaina mandoa Ar 100 isan'olona/andro amin'ity sandoka ity, vola ange izany rey olona e
Dia mitovy amin'ny sekta sy ny finoana ihany e. Ny sekta milaza fa mahita vahaolana amin'ny fahafatesana any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry zareo te ahazo vola amin'ny taxe de carbone milaza fa raha madoa io vola io ny olona rhetra mampiasa entona na solika dia tokony ho voaharo ny fiakaran'ny hafanan'ny tany.
Dia mianara aloha equilibre thermique tsara vao miresaka. Tsy adala ny mpandala ny Fizika tsy niditra tamin'io, satria zavatra tsy ahitana valiny ohatran'ny fahafatesana io.
Fa Taxe de carbone = 1/10 karena e
2) Tsy hitan'i Rhaj0 ny mampitovy ny fanandevozana sy ny AGOA: "Samy te hamokatra zavatra amin'ny vidiny mora". Fa ilay izy koa moa rehefa hoe Amerikanina dia na mangery aza lasa zezika no iantsoana azy fa tsy Kaka intsony hoy ny namako izay. Ka tsy haiku tratran'izay aretina izay koa ny namako.
Izaho mba efa niasa tamin'ny zone ihany nanao saisie, fa asa aloha ny namana raha mba nanana izay traik'efa izay na tsia. Na mitovy amin'ny karana ihany hoe: "Rehefa mahazo ve ireo na kely aza tsy miteny fa betsaka ny mpitady karama". Ao anaty zone tsy misy fitserana izany fa rehefa marary ianao ka tsy afaka miverina afaka telo andro dia barakay. Be ny mpitady asa ao am-bavahady.
Tamin'ny andron'ny Andevo ny tompony manome trano, sakafo sy daka. Fa ny AGOA na ny hofatrano herinandro aza manahirana fa tsy manao heure supplementaire vao afaka mikaka ny ankizy.
Sa izay no mahafaly ny olona sasany: "Mahita ny fijalian'ny mpitady karama". Dia karana ihany izany e...
Ho ahy aloha dia naleoko mijery ny olona miantoka trondro teo Anosy, dia ompiana eny Anosizato herinandro vao amidy e. Ireny ny olona manana saina sy mikaroka amiko, fa tsy ity mitavandra volam-bazaha malaza tsy ihinana ity.
Fa io moa samy manana ny sainy ny olona. Samy manana ny fahitany ny hoe inona no atao hoe fanandevozana.
rhaj0 - 10/11/2016 14:15
Ny fivoaran'ny Planeta Latera lazainao kosany, toa ny Pleistocene sns... dia jereo ihany ny echelle des temps, fa amina million d'annees, ny tantarany na ny fivoarana na fiovana.
The Pleistocene Epoch is typically defined as the time period that began about 1.8 million years ago and lasted until about 11,700 years ago.
Ny setroka avoakan'ny volkano, ny effet El Nino na Nina, dia mitondra @ fanafanana tokoany koa, fa ponctuel. Dia ny etotry ny omby koa, dia eny, ekena fa manampy ny fanafanan'ny Tany.
Fa ny ataon'ny indostria, ny fandoroana solika sy hazo, ireo dia manafana dia manafana tokoany ny Tany; ary ny vokatr'ireo no hita misongadina. Ary io anefa efa vita kajy ary azon-draolona controler-na. (fa efa misy mahay ny mi-controle ny etotry ny omby ihany k'lou ee)
Ilay carbon tax dia tena mila fantarina tsara.
the method favored by many economists for reducing global-warming emissions — charges those who emit carbon dioxide (CO2) for their emissions.
Ka rtena tsy haiko hoe, inona no tsy ankafizanao an'io carbon tax io. Ny tany mpanankarena mpangetotra karibona (ao Eoropa sy Kanada) azany vonona ny handoa vola ho anao tany mahantra fa semporin'ilay etotra. I Donald multimillionaire izao nefa mety handà tsy tia handoa an'io tax io ny orinasany, fa mampihena ny benefisiny.
Ka io ho'a... ianao ve mitolona ho an-dRampanana, na manohana na manasoaso ny heviny, nefa ianao toa tsy migalabona toa azy akoriny? Dia ny pire, vola tokony ho aloan-dRAmpanana ho anao mahantra io, eny vola ho anao, no toa akipakipakao?
2. ny AGOA
RAha ny consumerisme kosa aloha ny resaka, dia tsy hita fa io izao no misy. Fanontaniana azany: rahefa mividy zavatra"@ vidiny mora" ianao ao, dia mba nanontani-tena ihany ve ianao hoe. sao "fanandevozana" tokoany no namokatra an'ity?
Ianao izao ao mety mba te-hanana telefaonina intelizan isaka ny 2 taona. Ny ahy nefa izao ny ampiasaiko ato tsy intelizan akoriny ary efa 7 taona nananako azy. Dia ianao nefa izany consumerista be ao koa izany, mba te-ahazo ny anao "@ vidiny mora".
Consumerisme izao no misy fa dia ento @ conscience-nao ao fotsiny izany iilay fiainana eee...
Fa dia tsy haiko koa ho'a hoe, inona no tsy ankafizanao an'io AGOA io. Ry Bekintana azany azany vonona ny tsy hampandoa haba @ vokatra/akora gasy ho amidy ao @ tsenany. Izaho izao efa nanandrana nampiditra entana gasy taty, dia TSY nandoa haba, dia efa mba tombony ho ahy iny, ary afaka mifaninana amin-dry amerikana tatsimo aho @ io.
Globalization izao koa ny fiainana eee.. tsy vitan'ny "miantoka trondro ao Anosy" dia velona ny gasy 22 millions, izay indrisy ry tava-tsosisy fa tia hanana telefaonina intellizan koa.
Fa marina ny anao. Ilay asa = fanandevozana dia mila fakafakaina ary eritreretina tsara tokoany....
rhaj0 - 10/11/2016 14:56
Tohizako kely.. Ekena fa ilay "asa = fanandevozana" ataon'ireo orinasa izay handefa ny entana any Zamerika dia olana.
Fa zavatra 2 misaraka tsara io:
1- orinasa manandevo
2- mivarotra entana any Zamerika = AGOA
Ka ilay orinasa anie no manandevo (fa tsy ny amerikana) eee... Ilay orinasa @ io mety maorisiana na frantsay.
Ary ny orinasa Frantsay izay manondrana any France koa angaha tsy manandevo?
Zavatra hafa, ilay #1, no (mila) iadiana fa tsy ny AGOA, ilay #2.
- Rahefa mamaritra ny zone ho afa-kaba Rafanja, dia mila mamaritra ny zon'ny mpiasa koa.
- Toa ny rahefa mamaritra ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany i Rafanja, dia ampiarahina ny fiarovana ny zon'ny mpiasa na ny fanajana ny tontolo iainana.
Ny fiadiana an'io hono, dia ... raiso an-tsary, dia youtuber-o, dia ampahalalao @ vazan-tany efatra, fa mety tonga any an-tsofin'ny Consumer ihany io, ary dia ho voatery ilay orinasa mpanandevo hanova famindra eee...
endriny - 10/11/2016 15:03
1) hafanan'ny tany. Dia modin-dry Rhaj0 tsy jerena izany satria hoe efa taloha izany. Dia ahoana ilay hoe 1/3n'ny tany ihany no manana hafanana 37 fa ny sisa rehetra miakatra hatrany @ 2000. Sa moadiana fanina fotsiny.
Io moa araka ny fombam-pinoana e. Ny olom-belona ihany no lazaina fa fototry ny olana amin'izay miondrika ny olona. Fa ilay olona mpanely an'ilay izy maka taxe de carbone sy 1/10 karena fotsiny.
Dia lazaina fa "ny tany manankarena aza vonona ny handoa an'io". Fa mba alalino hoe inona no fiatraikany amin'ny tany mahantra, mba jereo lalina. Ny fampiasana ny taxe carbone dia hampiakatra ny vesatry ny famokarana indostrialy. Ka hampitombo vidy ny vokatra afarantsika manontolo. Tsy hisy tany manomeme maimaim-poana izany. Atra aza tmbola manome fepetra be dia be.
Rehefa zatra mahazo avy any aminy isika noho ny taxe carbone dia lasa olona zatra mangataka ka tsy afaka handroso intsony fa androrosy eto foana.
Ny anay izany ny ala asainy tsy tapahina fa ny azy anaovany trano, pate a papier, kilalao, raoplanina, sambo... mhafinaritra e.
rhaj0 - 10/11/2016 16:17
Azoko ny resaky ny tany mahantra. Rahefa ry Brezil ohatra mba t-hampitombo haingana ny industrialisation-ny, dia voakapoka koa izy, nefa ny Amerikana efa ela no namely sy nanapotika. ka raha i Donald manao loham-boto tsy handoa carbon tax, dia hidrikina daholo koa ry Sina sns...
Fa samia mijery ny tenany, fa adin'ny tia tena mantsy ity fiainana ity izao. Ny (orinasa) Gasy ve misy asaina mandoa carbon tax? Tsia.
Ka inona no anaovana mpisolo-vava an-dRampanana eo ho'a eee?
Raha hoe ny carbon tax no "hampitombo vidy ny vokatra afarantsika".. Raha ampifandraisana @ AGOA io, dia raha ataonao ny biodzen'ny bizina, dia vinavinao azany; iza @ ireto no $$$ be kokoa ho an'ilay orinasa
1- ny benefisy sy marge de profit
2- ny baojy ho an'ny debabe sy ny investisseurs
3- ny karama sy avantage-n'ny mpiasa madinika
4- ny pub atao hanasoasoana ny atao ao, hanatsarana ny image ao
5- ny carbon tax mila aloa raha mi-polluer
Aty Kanada izao misy ary betsaka ny orinasa, dia volontaire mandoa carbon tax izy, mba ho tsaratsara ny fijerin'ny mpanjifa azy... Sahala @ fandraisany anjara any @ asa soa ihany io.
Hoy ianao hoe rahefa "mandray carbon tax" dia lasa "zatra mangataka". Ny fahazoako ilay carbon tax, dia misy condition sy regles ny fampiasan'izay mandray azy, ary izany dia ny itsinjovana marina koa ny mba hampihenana ny faharavana. Tsy "aide" toa ny fanomezan'ny frantsay taloha ohatra io, fa efa mekanisma hafa ny fampiharana azy.
Ny hoe, ny Kanadiana koa ohatra manapaka ny ala, dia marina ny anao. Fa io ho'a mila maka recul ihany eee... Izaho aloha dia tena miniana milaza anao fa
1- tena aleoko ny amerikana na kanadiana na eoropeana no manapaka ala ohatra, na mitrandraka petrole
2- toa izay .. ny sinoa.. na koa ny tompo-tany
Iretsy #1 iretsy dia, raha mahay mihetsika ianao, raha mahay mihetsika ho'a ianao, dia mety azo enjehina atao arakaraka ihany raha manimba sy mandravarava. Fa ireo #2 ireo, na ny teknika ampiasainy, na ny redevabilité-ny, na ny alehan'ny benefisy, dia tena tsy any mihntsy eee...
endriny ahoana ilay hoe 1/3n'ny tany ihany no manana hafanana 37 fa ny sisa rehetra miakatra hatrany @ 2000. Sa moadiana fanina fotsiny.
Koa na misy azany io (tsy no-verifier-ko), dia mila atrehina koa ny vokatry ny industrialisation. Efa fantatra ary voakajy ho'a ny faharavana vokatry ny industrialisation. Koa ara-kitsiny raha mandoa (carbon tax) izay manao azy, indrindra ny Amerikana. Dia io miverina @ Donald isika hoe, ilery ve hitrifana?
iverenako ihany. Efa fantatra ary voakajy ho'a ny faharavana vokatry ny industrialisation. Rahefa mahalala ianao hoe, aiza no alehan'ilay carbone avy @ ilay setroka mipololotran'ilay ozinina, dia mety ho koditra ihany.
rhaj0 - 14/11/2016 18:00
Ny @ resaofema kilimatika aloha dia aoka hazava fa tsy anganoangano..
Sur Terre, des records de chaleur absolus ont été battus dans plusieurs régions:
42,7 °C à Pretoria, 38,9 °C à Johannesbourg, 44,6 °C en Thaïlande, 51 °C en Inde.
Fa jereo ho'a iza no manafana ny Tany. Dia mampanontania-tena ihany hoe, mahomby mihintsy ny propagandy na fanasan-dohan-drizareo izany, raha gasikely aby no mahavita manao mpisolo-vava ny (tany) mpanankarena ...